Posted On:July 7,2019
गैरआवासीय नेपाली संघको सातौं एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक तथा दोस्रो महिला बैठकको आज म्यानमारको यान्गोनमा औपचारिक उद्घाटन भयो । नेपालको समृध्दिका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको भूमिका विषयमा केन्द्रित रहने बैठकको म्यानमारका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मन्त्री चो टिम, नेपालका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, संघीय संसदका माननीय सदस्य डा. सूर्य पाठक, म्यानमारका लागि नेपाली राजदुत तथा संघका संस्थापक महासचिव भीम उदास, संघका अध्यक्ष भवन भट्ट र संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक डा. उपेन्द्र महतोले संयुक्त रुपमा पानसमा बत्ति बालेर गर्नु भयो ।
उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै म्यानमारका मन्त्री टिनले म्यानमार र नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश गर्दै गरेका मुलक भएकाले मिलेर काम गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउनु भयो । नेपालले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन म्यानमार सरकारको तर्फबाट सक्दो सहयोग हुने विश्वास दिलाउँदै म्यानमारका जनता पनि विदेश जाने क्रम बढ्दै गरेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीहरुको अभियानबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने धारणा राख्नु भयो ।
संघीय संसदका सदस्य माननीय डा. सूर्य पाठकले विशेष अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरु नेपालको सम्पत्ति भएकाले अव यो समुह नेपालको विकासको साझेदार हुनुपर्ने बताउनु भयो । गैरआवासीय नेपालीहरुले तपाईहरुका विषयमा कसले के भने भन्ने तिर नलागी संविधानमा के लेखेको छ त्यसलाई हेरेर कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा बस्न आग्रह गर्दै संविधानको भावना अनुसारका कानूनहरु बनाउन आफूहरु कटिबध्द भएको विश्वास दिलाउनु भयो ।
त्यसै गरी अर्का विशेष अतिथि नेपाल सरकारका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले हामीले विदेशमा रहेका नेपाली वा नेपाली मुलका नेपालीहरुलाई नेपालमा अधिकतम अधिकार सहित नेपालसँगको सम्बन्धलाई जोडी राख्नु जरुरी भएको र त्यसले नेपाललाई नै फाइदा हुने हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी भएको धारणा राख्नु भयो ।
म्यानमारका लागि नेपाली राजदुत भीम उदासले म्यानमारमा नेपाली मुलका म्यानमारी नागरिकले नेपाली भाषा कला संस्कृतिको जसरी जगर्ना गरिरहेका छन् त्यो उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशका बीचमा धेरै समानताहरु भएकाले आपसमा सहकार्य गरेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
संघका अध्यक्ष भवन भट्टले उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन लागि पर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालको समृध्दिका लागि हामी सबै एकजुट हुनु्को अव अर्को कुनै विकल्प नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसैगरी संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक डा. उपेन्द्र महतोले व्यक्तिगत सफलताले व्यक्ति धनी भए पनि राष्ट्र समृद्ध नभएसम्म त्यसको केही महत्व नहुने भएकाले नेपाल राष्ट्रको समृध्दि मात्रै हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
हलबाहिर रिवन काटेर र हलभित्र पानसमा बत्ति बालेर उद्घाटन गरिएको कार्यक्रमको सुरुवात म्यानमार र नेपालको राष्ट्रिय गान तथा सांस्कृतिक झलक प्रस्तुतिबाट गरिएको थियो । क्षेत्रीय संयोजक किरण विक्रम थापाले सभापतित्व गर्नु भएको उद्घाटन समारोहमा संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्त र कुल आचार्य, महासचिव डा. बद्री केसी, सचिव डिवि क्षेत्री, प्रवक्ता भूषण घिमिरे, युवा संयोजक सुदन थापा, सल्लाहकार डा. हेमराज शर्मा लगायत अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य र अभियन्ताहरु गरी करिब ३०० को सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन संघका एसिया प्यासिफिक उपसंयोजक पारशमणि पोख्रेल र गणेश मिश्रले संयुक्त रुपमा गर्नु भएको थियो । हिजोबाट सुरुभएको क्षेत्रीय बैठकको विभिन्न विषयगत सत्रहरुमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय सहित आज जुलाई सातमा समापन हुने छ ।
सातौं एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक
"Decision of 7th APRM"